ထုတ်ကုန်များ > 6-Bromopurine (767-69-1)
CGMP ကုန်ထုတ်လုပ်မှုအောက်မှာအရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုစနစ်ဖြင့် 6-Bromopurine (767-69-1) ၏အမြောက်အမြားထုတ်လုပ် synthesize နှင့်ထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်း
SKU: 767-69-1 အမျိုးအစား: Heterocycles
6-Bromopurine (767-69-1) ကဗီဒီယို
6-Bromopurine (767-69-1) အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်
MDL အရေအတွက် MFCD00022648
InChI Key ကို CTGFGRDVWBZYNB-UHFFFAOYSA-N ကို
မော်လီကျူးအလေးချိန် (ဆ / mol) 199.011 g / mol
အပြုံး C1 = NC2 = ကို C (N1) ကို C (= NC = N2) Br
အရည်ပျော်မှတ် > 300 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်
assay 98% -100%
APICMO မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့သိပ္ပံပညာရှင်များဓာတုပေါင်းစပ်, ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဓာတုဗေဒ, အသက်ရှင်ခြင်းကိုသိပ္ပံ, နှင့်ဆက်စပ်သိပ္ပံနည်းကျအလုပ်အတွက်ကျယ်ပြန့်အတွေ့အကြုံကိုရှိသည်။ ကျနော်တို့သုတေသန, ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်အခြားဓာတုပစ္စည်းများပေါင်းစပ်များအတွက်ရည်ရွယ်သော 6-Bromopurine ၏အမြောက်အမြားထုတ်လုပ်ပေးသည်။
အဘို့အ 1 ပြန်လည်သုံးသပ် 6-Bromopurine (767-69-1)
အဆိုပါထုတ်ကုန် 6-halopurine alkynes, 2,3,4,5-tetrahydro-1,5-benzoxazepines-3-ol နှင့် triazole အနကျအဓိပ်ပါယျ synthesize ပါလိမ့်မယ်။ ဒါဟာ halogen heterocycles, အဆောက်အဦလုပ်ကွက်, purines နှင့်ဓာတုပေါင်းစပ်ကဲ့သို့တူညီသောအမျိုးအစားများအတွက်ကျရောက်ပါတယ်။
Vivo အတွက် Ehrlich carcinoma နှင့် sarcoma 180 ၏ ascites ဆဲလ်ပုံစံများ အသုံးပြု. စမ်းသပ်စနစ် azaserine များ၏လှုပ်ရှားမှု။
6-bromopurine nucleosides O-, S- နှင့်ဝင်ရိုးစွန်းအရည်အတွက် N ကိုပါဝင်သော nucleophiles နှင့်အတူအစားထိုးတုံ့ပြန်မှုအဘို့ကြီးသောအလွှာဖြစ်ကြသည်။ ကင်ဆာကုထုံးအတွက်သိသိသာသာပစ်မှတ်အဖြစ် tubulin နှင့် topoisomerase II ကိုပစ်မှတ်ထားဖို့ podophyllotoxin သစ်လူတန်းစားများ၏ရေးဆွဲရေးဆီသို့, isoxazolidine podophyllotoxin အနကျအဓိပ်ပါယျတစ်စီးရီးဒီဇိုင်းရေးဆွဲခဲ့ကြသည်။ taxol, vinblastine, colchicines သို့မဟုတ် zampanolide နှင့်အတူရှုပ်ထွေးလေးβ-tubulin နှင့် etoposide နှင့်အတူရှုပ်ထွေးအတွက် topoisomerase အဆိုပါ docking module တစ်ခုအဖြစ် GOLD5.2.2 အသုံးပြု. ပစ်မှတ်အဖြစ်အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။
အောက်မှာဖေါ်ပြတဲ့အတိုင်း tubulin ဒိုမိန်းသို့ကြံ့ခိုင်ရေး၏ထင်ရှားအရေးကြီးသောအခြေခံအဆောက်အဝိသေသလက္ခဏာများကိုဆှေးနှေးခဲ့ကြပြီ
5a-β, 8a-α configuration များနှင့်အတူ lactone (လက်စွပ်: D) ၏ဖြတ်ကျော်တိမ်းညွတ်;
လက်စွပ် E ကိုအခမဲ့လည်ပတ်;
α (R) သို့မဟုတ်β (S) မစီစဉ်ဖွဲ့စည်းမှုအနေအထား5အတွက်တန်းတူကြံ့ခိုင်ရေးရှိပါတယ်;
အဆိုပါ isoxazolidine နှင့်ဖော့စဖိတ်လက်စွပ်အကြား Ethylene တံတား;
isoxazolidine လက်စွပ်၏ N2-position မှာ Benzyl moiety; နှင့်
n- နှင့်အတူနေရာချပေး isoxazolidine လက်စွပ်၏ရာထူး5(2-oxopyrimidin-4-yl) acetamide, 6-bromo-9H-purine, ဒါမှမဟုတ် 2-အမိုင်နို-6H-purin-6-တပါးတည်း။
(1) β (S) မစီစဉ်ဖွဲ့စည်းမှုအနေအထား5အတွက်αထက်ပိုမိုမြင့်မားရမှတ်ကြံ့ခိုင်ရေး (R) ရှိပါတယ် မှလွဲ. ဤသူအပေါင်းတို့သည်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာဝိသေသလက္ခဏာများ, topoisomerase II ကိုသို့မှန်ကန်စွာ fit မှဒြပ်ပေါင်းများကိုအဘို့အလွန်အရေးပါပါ၏ (2) 4'-OH; 3H-purin-5-Amin, 7-bromo-6H-purine သို့မဟုတ် 6-အမိုင်နို-9H-purin-2-One နှင့်အတူပိုကောင်းနေရာချပေး isoxazolidine လက်စွပ်နှင့် (6) အနေအထား6။ အဆိပ်လေ့လာမှုများနှင့်ကွန်ပျူတာဆိုင်ရာ ADMET အဆိုပါ docking ရလဒ်များကိုနှင့်အတူသဘောတူညီချက်ရှိကြ၏။ isoxazolidine လက်စွပ်၏ N2-position မှာ benzyl moiety နှင့်ဖော့စဖိတ်အကြား Ethylene တံတားကိုင်ပြီးအဆိုပါဒြပ်ပေါင်းများမှာအများဆုံး pharmacokinetic ဂုဏ်သတ္တိများရှိသည်နှင့် Non-အဆိပ်အတောက်ဖြစ်ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့သည်။ ဒြပ်ပေါင်းများနှင့်အတူ 4'-OMe အများစုများအတွက်မျှော်မှန်းနိုင်မှုပရိုဖိုင်းကိုအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒါဟာကျွန်တော်တို့ကိုလျော့နည်းအဆိပ်အတောက်များနှင့်တိုးတက်လာသောလှုပ်ရှားမှုနှင့်အတူတစ် antitumor အေးဂျင့်အဖြစ်အသစ်ကအရိပ်အမြွက်ကတိပေး၏မှတ်ပုံတင်၌အကြှနျုပျတို့၏ရည်ရွယ်ချက်နားလည်သဘောပေါက်စေတော်မူ၏။
IUPAC name ကို 6-bromo-7H-purine
အဘယ်သူမျှမ CAS ။ 767-69-1
နာမ် · 6-bromo-7H-purine
· Purine, 6-bromo-
· 1H-purine, 6-bromo-
· 9H-purine, 6-bromo
မော်လီကျူးအလေးချိန် (ဆ / mol) 199.011
ဖော်မြူလာအလေးချိန် (ဆ / mol) 199.01
အရည်ပျော်အမှတ် (C) > 300
ပွက်ပွက်ဆူနေသောအမှတ် (C) 450 mmHg မှာ 760
Flash ကိုအမှတ် (C) 260
သိပ်သည်းဆ (ဆ / စင်တီမီတာ3) 1.7
ဓာတုနှင့် 6-Bromopurine ၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ Properties ကို
6-Bromopurine Methanol နှင့် dimethyl sulfoxide အတွက်အနည်းငယ်ပျော်ဝင်ဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါဓာတု paleyellow မှုန့်ပုံစံတည်ရှိ
လက်ခံသူအရေအတွက် -3ယူနစ်
6-Bromopurine အပူ, အလင်းနှင့်စိုထိုင်းသောအခြေအနေအလွန်အမင်းထိခိုက်မခံဖြစ်ပါတယ်။
အတိအကျ Mass (G / Mol) 197.954
Monoisotopic အစုလိုက်အပြုံလိုက် (ဆ / mol) 197.954
Topological အရောင်အသွေးစုံ Surface ကဧရိယာ 54.5 တစ် ^ 2
အံအလင်းယိုင် (စင်တီမီတာ3) 38
6-halopurine နှင့်၎င်းတို့၏ triazole အနကျအဓိပ်ပါယျ၏ပေါင်းစပ်
6-Bromopurine ကိုင်တွယ်ခြင်းမပြုမီ, သင်အန္တရာယ်ကြောင့်သင့်ကျန်းမာရေးအပေါ်ရှိစေခြင်းငှါအန္တရာယ်များကိုသတိပြုမိဖြစ်သင့်သည်။
1 ။ အင်ဂျင်နီယာထိန်းချုပ်မှု
ဤရွေ့ကားနည်းလမ်းများဓာတု-based ဓာတ်ခွဲခန်းများတွင်ဘေးအန္တရာယ်လျှော့ချ၏အရှိဆုံး, ယုံကြည်စိတ်ချရသောအမြဲတမ်းနှင့်သေချာနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ သူတို့ကအိပ်ဇောလေဝင်လေထွက်, ဓာတုအငွေ့ပါးပျဉ်း, ထုတ်လွှတ်မှုအရင်းအမြစ်ဝင်း, ဖြစ်စဉ်ကိုထိန်းချုပ်နှင့်တစ်ဦးအဆင်ပြေဘေးကင်းလုံခြုံမှုရေချိုးခန်းပါဝင်သည်။
ဒီစနစ်ဟာပိုးလေထုထဲကအ filter သို့မဟုတ်အသုံးပြုသူကနေဝေးကိုညွှန်ကြားနိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာတစ်ဦးလေကြောင်းသန့်ရှင်းရေးကိရိယာ recirculation ပြွန်, ဒါမှမဟုတ်တစ်ဦးပန်ကာတို့ပါဝင်သည်။
အသုံးပြုသူအနေဖြင့်ဓာတုခွဲခြားသည့်ပူးတွဲအာကာသအတွင်းအလုပ်လုပ်ကြသည်။ အဆိုပါဝင်းခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲပုဂ္ဂိုလ်များအားဖြင့် access ကိုကာကွယ်တားဆီးဖို့ကောင်းစွာ-တံဆိပ်ခတ်ဖြစ်သင့်သည်။
2 ။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး
သင့်လျော်သောအဝတ်အစားနှင့်သင်၏ခန်ဓာကိုယျတစျခုလုံးကိုဖုံးလွှမ်း။ မကျြနှာကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဘို့, တစ်လျောက်ပတ်မျက်နှာဖုံး, Air-စင်ကြယ်စေစွမ်းရည်နှင့်အတူ anda အသက်ရှူကိရိယာလုံခြုံမှုကာမျက်မှန်ကိုတပ်ပြီးသုံးပါ။ chemical- ခံနိုင်ရည်ရော်ဘာလက်အိတ်, impervious ဖိနပ်နှင့်အပြည့်အဝဝတ်စုံကိုဝတ်ဆင်။
သင်သည်မည်သည့်အဆက်အသွယ်မှန်ဘီလူးရှိပါကသူတို့ကိုဖယ်ရှားချက်ချင်းအကြောင်းကို 10 မိနစ်ဘို့ရေကိုအပြေး၏ပဒေသာနှင့်အတူမျက်စိသုတ်ခြင်း။ ယားယံဆက်ရှိနေသေးလျှင်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအာရုံကိုရှာကြလော့။
ချေးကာကွယ်တားဆီးဖို့ရေပြေးတစ်ဦး copious ငွေပမာဏနှင့်အတူအစက်အပြောက်ဆေးကြောပါ။ နောက်ထပ်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအကြံဉာဏ်ကိုရှာကြံမတိုင်မီလာမည့် 15 မိနစ်ဘေးဒဏ်သင့်ဒေသသို့ flushing Continue ။
လုံလောကျရေနှင့်အတူပါးစပ်ရှင်းလင်းရန်နှင့်အဆိပ် minimize လုပ်ဖို့ဆေးပညာဆိုင်ရာအကြံပေးချက်ကိုရှာကြာလော့။
4 ။ 6-Bromopurine အသုံးပြုတဲ့အခါ
spillages ၏အမှု၌, အလုပ်လုပ်ခုံတန်းလျား clean နှင့်ဓာတုစွန့်ပစ်စွန့်ပစ်ခြင်းစည်းမျဉ်းနှုန်းအတိုင်းအကြွင်းအကျန်များဖယ်ရှားရှင်းလင်းရေး
6 ။ ဘယ်အချိန်မှာမပေးအသုံးပြုမှုအတွက်
တစ်ဦးတင်းကျပ်စွာတံခါးပိတ်ကွန်တိန်နာအတွင်း Store က
6-Bromopurine တဲ့ professional သို့မဟုတ်ပါဝင်ပတ်သက်အန္တရာယ်များနားလည်သောသူတစ်ဦးကျွမ်းကျင်သူများကကိုင်တွယ်ရပါမည်။ အမြဲတမ်းထိုကဲ့သို့သောအဆိပ်အငွေ့ဓာတ်များကိုရှောင်ရှားရန်အသက်ရှူကိရိယာအဖြစ်အကာအကွယ်ဝတ်စုံများဝတ်ဆင်။ ရှိုက်ရသောအခါဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, ဘရိုမိုင်းဟာအသက်ရှူလမ်းကြောင်းမှအဆိပ်ဖြစ်ပါတယ်။
အလုံအလောက်လေဝင်လေထွက်နှင့်အတူအခန်းတခန်းထဲမှာအနိမ့်သောအပူချိန်အောက်မှာထုတ်ကုန်သိမ်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ဖြစ်နိုင်ရင်, ဒီ-20˚Cမှာရေခဲသေတ္တာထဲမှာဖြစ်သင့်သည်။ အလင်းသို့မဟုတ်အစိုဓာတ်ကိုထိတွေ့ကန့်သတ်။
8 ။ မီးသတ်သမားအစီအမံ
မီး၏အမှု၌ခြောက်သွေ့မှုန့်, အရက်, ပေါ်လီမာရေမြှုပ်ခြင်းသို့မဟုတ်ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ဓာတ်ငွေ့နှင့်အတူငရဲမီးဆံ့။ လောင်ကျွမ်းခြင်းထုတ်ကုန်သင့်ရဲ့ကျန်းမာရေးကိုအန္တရာယ်ဖြစ်စေခြင်းငှါကတည်းကအငွေ့ရှူရှိုက်မိခြင်းရှောင်ကြဉ်ပါ။ ဤရွေ့ကားဘေးထွက်ဘရိုမိုင်း, ဟိုက်ဒရိုဂျင်ပျံ့နှံ့ခြင်းမှ bromine, နိုက်ထရိုဂျင်အောက်ဆိုဒ်နှင့်ကာဗွန်မိုနောက်ဆိုဒ်တို့ပါဝင်သည်။
9 ။ တည်ငြိမ်မှုနှင့် reactivity ကို
အဲဒါကိုဓါတုဗေဒပြိုကွဲဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြလိမ့်မယ်ကတည်းက 6-Bromopurineto ဓာတ်အေးဂျင့်များ, အပူ, ဒါမှမဟုတ်မီးတောက်များဖော်ထုတ်ရှောင်ကြဉ်ပါ။
10 ။ ဓာတုစွန့်ပစ်ခြင်း
6-Bromopurine ၏စွန့်သည့်အခါဖက်ဒရယ်, ပြည်နယ်နှင့်ဒေသဆိုင်ရာဥပဒေများလိုက်နာ။ သင်ကစွန့်ပစ်ခြင်းအားဖြင့်သင်တို့ကိုကူညီပေးဖို့သင့်ဒေသခံအခွင့်အာဏာနှင့်အတူအလုပ်လုပ်နိုင်ပါတယ်။
6-Bromopurine သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးမဆို mode ကိုများအတွက် Non-အန္တရာယ်ရှိသောဖြစ်ပါသည်
6-Bromopurine Sara ခေါင်းစဉ် III ကိုပုဒ်မ 302 နှင့် 313 အားဖြင့်သတ်မှတ်ထားတံခါးခုံအဆင့်ကိုကျော်လွန်ခြင်းမရှိလူသိများ CAS number ကိုရှိပါတယ်။ သင့်ဒေသခံအခွင့်အာဏာကကမ်းလှမ်းစည်းမျဉ်းများအတိုင်းလိုက်နာရန်သေချာစေပါ။
6-Bromopurine (767-69-1) အစုလိုက်အမိန့်နှင့်စျေးနှုန်း
ဇီဝနည်းပညာသတင်းအချက်အလက်, အမေရိကန်သည်အမျိုးသားလုံခြုံရေးရေးစင်တာ။ ဆေးပညာ, Pubchem ၏အမျိုးသားစာကြည့်တိုက်, 6-Bromopurine, ကဏ္ဍများ 1-10 ။
EA ၏ Veliz, PA ဆိုပြီး Beal - အော်ဂဲနစ်ဓာတုဗေဒ၏ဂျာနယ်, 2001
ဒိုအေVéliz *, ပေတရုအေ Beal* org ။ Chem ။, 2001, 66(25), စစ 8592-8598 ။